သင်ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ရဲ့လား ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » သင်ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ရဲ့လား ?
Posted by Yin Nyine Nway on Jul 28, 2010 in News |2comments
လူတစ်ယောက်ဟာ အိပ်ရေးပျက်တဲ့ညတွေ များလာမယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင် နိုင်အားတွေ၊ ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုတွေဟာလည်း ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်.. ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့တွေရဲ့ ဘ၀မှာ နေ့စဉ် အိပ်ရေး၀၀ အိပ်စက်ခွင့်ဟာ သိပ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်.. တစ်ချို့သော သူတွေအတွက် ညတွေမှာ အိပ်ပျော်ဖို့ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားနေ ရပါတယ်ဆိုရင် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အချက်လေးတွေကို ရှာဖွေလေ့လာ တွေ့ရှိထား သလောက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်… ကြိုးစားပြီး လိုက်နာကြည့်မယ် ဆိုရင် လှပတဲ့ အိပ်မက်ည လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်လာနိုင် လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်.
http://mmhealthylife.com/page/2 မှာလဲ တင်ထားပါတယ်…
အိပ်ရေးကတော့ သိပ်မ၀ဘူး ဒီတလော အလုပ်တွေ များတော့ ဘယ်လောက် အိပ်အိပ် မ၀ဘူး အချိန်ကလည်း ပိုအိပ်လို့မရတော့ ခေါင်းနဲ့ ခေါင်းအုန်း ပုံမှန်အချိန်ထိပြီး ပုံမှန်အချိန်ခွာတာတောင် အိပ်ရေးမ၀ဘူး။ ဒါနဲ့ ထူးဆန်းတာတခုကလေ လပြည့်ညဆို အိပ်မပျော်ဘူး ခေါင်းကို လရောင်ထိုးနေတာ မျက်လုံးကျိမ်းလို့။ အဲလို အိပ်မပျော်ဘူးဆို ခေါင်းက ချွှေးတွေပါထွက်လာကော